Amaqhinga abulala ukuThengisa kweMixholo yakho #CONEX
NgoLwesibini, Agasti 21, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Izolo ndixelele ukuba ndifunde kangakanani malunga nokwakha amacebo e-ABM e-CONEX, inkomfa eToronto kunye neUberflip. Namhlanje, bakhuphe zonke iindawo zokumisa ngokuzisa zonke izinto ezibalaseleyo zokuthengisa ezenziwa lushishino- uJay Baer, ​​uAnn Handley, uMarcus Sheridan, uTamsen Webster, kunye noScott Stratten ukubala nje abambalwa. Nangona kunjalo, i-vibe yayingengomxholo wakho oqhelekileyo-iitos kunye neengcebiso. Luluvo lwam nje, kodwa ingxoxo namhlanje ibininzi kakhulu
Umxholo wexeshana, iTrust kunye neMfezeko zihlala zihleli
NgoLwesithathu, uDisemba 3, 2014 Lwesine, Disemba 4, 2014 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bendiphumile edolophini kwaye khange ndifumane ixesha elininzi lokubhala umxholo njengoko bendiqhele ukwenza. Endaweni yokuphosa ezinye iiposti zeesile, ndandisazi ukuba lixesha leholide kuninzi lwabafundi bam kwaye ndikhethe ukungabhali mihla le. Emva kweminyaka elishumi yokubhala, olo luhlobo lwezinto ezindiqhubayo-ukubhala kuyinxalenye nje
NgeCawa, uDisemba 23, 2012 NgeCawa, uDisemba 23, 2012 Cody ebukhali
Ukuthengisa kweli xesha lanamhlanje kuyinto ehlekisayo; Ngelixa imikhankaso yentengiso esekwe kwiwebhu kulula kakhulu ukuyilandela kunemikhankaso yesiko, kuninzi kakhulu okufumanekayo okukuba abantu banokukhubazeka kwimfuno yedatha engaphezulu kunye ne-100% yolwazi oluchanekileyo. Kweminye, inani lexesha eligcinwe ngokukwazi ukufumana ngokukhawuleza inani labantu ababone intengiso yabo kwi-Intanethi ngenyanga enikiweyo ayichaswa lixesha